Suka eduze koshayela budedengu
SEKUZOQALA isiminyaminya emgwaqeni futhi kukhona abashayela budedengu
Intatheli Yazezimoto | December 9, 2021
ISIKHULU seMasterDrive u-Eugene Herbert sithi ukuphepha emgwaqeni kuncike nasekutheni ubhekana kanjani nabashayeli abashayela budedengu.
UHerbert uthe njengoba abanye behlela ukuya emaholidini noma ukuya ezihlotsheni, abashayeli bangazithola behlangana nabanye abashayela budedengu noma ababeka abanye engcupheni. Uthe ngakho ukuphepha akuncikile kuphela ekutheni ushayela kahle kodwa nasekutheni ubhekana kanjani nabashayela budedengu.
Uthe okubalulekile ukushiya isikhala esikhulu phakathi kwakho nomshayeli oshayela budedengu.
“Yize kungaba yinto ecasulayo ukuhlangana nomshayeli okubeka engcupheni kodwa okubalulekile ukuziba ukucasuka umvumele ukuthi asuke eduze kwakho ngokushesha.,” kusho uHerbert.
Uthe ngaphezu kokuqaphela abashayela budedengu, gada ukuthi nawe awubi nguye.
“Uma umuntu engakudlulisi ngokushesha, kunamathuba okuthi kunento ayibonayo wena ongayiboni. Gwema ukufakela abashayeli ingcindezi ekutheni benze into abangayithandi. Kungcono udlule ngaphandle kokufuna lutho kubo noma ulinde baze bakhululeke. Uma lina izulu futhi nabanye abashayeli benciphisa isivinini, nawe yenza njalo. Isivinini sakho kumele sihambisane nesimo nezimoto eziseceleni kwakho kunaleso esibhaliwe. Isivinini esibhaliwe siphezulu futhi akusho ukuthi kumele uhambe ngaso,” kusho uHerbert.
Uthe nazi izinto ezijwayelekile:
-Abadlula budedengu: Uma umshayeli ekufakela ingcindezi yokuthi ugudluke ukuze adlule kepha wena uyabona ukuthi kunezimoto ezizayo futhi awukhululekile, qhubeka ushayele kahle kuze kuba uyabona ukuthi sekuphephile. Uma sekuphephile, kungcono ukumdedela adlule kunokuqhubeka umvimbe.
-Abashayeli abashayela budedengu futhi ngesivinini: Uma umshayeli eshintsha imizila ngokushesha, gudluka ngendlela ephephile ukuze adlule kunokuthi asondele eduze kwakho. Emzileni owodwa linda kuze kuphephe bese uyagudluka adlule.
-Izimoto ezisondele eduze emva kwakho: Nakhona gudluka uyiyeke idlule ngokushesha. Uma wazi ukuthi uzojika, sheshe ukhombise kusanesikhathi ukuze umshayeli ongemuva kwakho ezobona ukuthi wehlisa isivinini bese uyajika.
-Izimoto ezingakulungele ukuba semgwaqeni: Kunezinto ezikukhombisayo ukuthi kumele uqhele eduze kwaleyo moto njengamalambu amabhreki nama-indicator afile ezingakubeka engozini uma kukhona okungasebenzi.
Iyaheha i-Audi Q5 ethuthukisiwe